Misy GNOME 3.16 | Avy amin'ny Linux
Misy GNOME 3.16
Betsaka ny nanantena an'io ary eto izy. Navoaka ho azo antoka ny GNOME 3.16 ary mitondra fanatsarana sary maro miaraka aminy, izay hitantsika amin'ity horonantsary manaraka ity:
Raha te hanandrana (tsy mametraka) izahay dia nampakatra sary ISO ho an'ny kitay USB mifototra amin'ny OpenSuse, izay hanome anay hevitra momba ny fiasan'ny kinova vaovao amin'ity Desktop Environment ity. Ary ao amin'ny repositories ArchLinux dia efa tafidina ny fonosana.
Amin'izao fotoana izao dia mizaha toetra azy amin'ny fahatsiarovan'ny USB aho, noho izany dia hanome ny fahatsapako aho avy eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Misy GNOME 3.16
Raha toa ny GNOME 3.16 miasa amin'ny andrana ISO dia ratsy ny lalan-kalehantsika .. Izao fotsiny no ilazako izany.
Tongava lehilahy ary andramo amin'ny Fedora na Arch xDDD
Efa miditra amin'ny trano fitehirizan-tsarimihetsika izy. Andramako izany. Na izany aza, sarotra amiko ny miala amin'ny KDE, saingy raharaha hafa izany. 😛
SATANA dia hoy izy:
Nanandrana ny Gnome 3.16 fotsiny aho, satria indrisy fa nanavao tsy nieritreritra ny vokany.
Mandeha FATA L.
Mamaly an'i SATANANA
Ao amin'ny takelaka iray no tiako andramana, any aho dia mieritreritra fa hanararaotra an'io interface io miaraka amin'ny sisin-tany sy sary masina lehibe natao ho an'ny rantsantanana mihoatra noho ny totozy.
ho an'ny tsiro ……… ..
Tena tiako ny sary masina lehibe, ary mampiasa ny totozy ... voalohany satria amin'ny farany dia ho eo amin'ny 7 ny fampiharana ampiasako miverimberina, faharoa satria tsy mila manana tanjona aho, fahatelo satria manana astigmatism aho 🙂 ary fahefatra satria manana efijery fanaraha-maso 27-inch (na eo amin'ny kahie aza dia tiako ihany koa ny manana sary masina "afovoany" na mora azo, etsy ankilany, rehefa miasa dia aza manelingelina satria miafina izy ireo.
Azo ahena ny sary masina, saingy toy ny mahazatra, latsaka fohy ny GNOME amin'ny fanaingoana azy, manome ambaratonga 3 amin'ny habeny izy: kely, salantsalany ary lehibe.
Azo ampitomboina bebe kokoa… Izay atolotry ny Gnome anao dia ireo ambaratonga telo fampiasa indrindra… Amin'ny fangaro CTRL + dia ampitomboinao ny habeny ary ampiarahinao amin'ny CTRL- miaraka: D.
Ary tsy maintsy mandalo Mazava ho azy ianao hahafantarana fa ... ry reniko, jereo, izy ireo manahirana ahy.
Hitsin-dàlana bebe kokoa ho an'ny Gnome:
Alt + F2: Mihazakazaha fampiharana (ho an'ny rafitra Solaris Meta-R)
Alt + F1: sokafy ny menio fampiharana (ho an'ny rafitra Solaris Ctrl-Esc)
Alt + F9: ahenao kely ny fikandrana miasa
Alt + Tab: Mihodina varavarankely
Ctrl + Alt + L: efijery hidin-trano
Ctrl + Alt + Del: Mivoaka
Shift + Ctrl + N: Mamorona fampirimana vaovao
Ctrl + T: Delete (alefa any amin'ny fako)
Shift + Del: Fafao foana ny rakitra iray (tsy mankany amin'ny fako io ary tsy averina)
Alt + ENTER: fananana rakitra / fisie
F2: Omeo anarana hoe fisie / fisie
Ctrl + A: Safidio daholo
Ctrl + W: Akatona ny varavarankely na kiheba
Ctrl + Shift + W: Akatona ny varavarankely Nautilus
F5: Refresh ny varavarankely Nautilus sy ny ao anatiny
Ctrl +: miditra ao
Ctrl-: Mivoaha avy eo
Ctrl + 0: Miverina amin'ny habe mahazatra
Kitio mazava: miverena
Alt + Home: sokafy ny fampirimana an-trano an'ny mpampiasa tsirairay
Ctrl + L: Jereo ny bara adiresy
F9: Afeno ny sisin'ny sidebar
Ctrl + H: Jereo ireo rakitra miafina
mpanota dia hoy izy:
Raha efa misy androany dia midika izany fa afaka herintaona dia ho hita izany.
Aza kivy fa mbola kely sisa.
Valiny amin'ny mpanota
Iyan dia hoy izy:
Sambany tao anatin'ny fotoana ela be aho no alaim-panahy hanandrana an'ity kinova Gnome vaovao ity. Heveriko fa hiandry ny Fedora 22 beta aho na raha manana totozy mandritra ny Paka angamba aho dia hametraka Arch indray.
Mamaly an'i Iyán
Ankoatra ny Distrohopping izay azon'ny mpampiasa GNU / Linux mijaly noho ny karazan-tsinjara sy ny tontolon'ny birao, rehefa te "miasa" ianao, izany hoe ho an'ny famokarana dia toa tsy misy fifaninanana amiko ny KDE.
Nampiasa lxde-openbox foana aho, tena xfce fa tamin'ny "ligy lehibe" an'ny tontolo gnome dia toa mavesatra sy ratsy tarehy foana.
Nampiasa Kubuntu 1 aho nandritra ny 14.04.2 volana, mandany loharano kely kokoa noho ny Gnome izy io, saingy manana ny fahatsapanao fa tsy mila manampy na inona na inona ianao, tsiranoka ary manana fikirakirana izay tsy tokony horaisin'ny mpampiasa Windows. Ny ela no antony fisafidianana ny KDE dia ny Dolphin, tsy misy mpitantana rakitra feno intsony tsy amin'ny tontolon'ny Linux ihany, fa amin'ny OS hafa rehetra.
Mety ho, na izaho, ohatra, ny zavatra voalohany nampiasako rehefa nifindra tany Linux aho dia Gnome 3 ao amin'ny Fedora 17 ary, na dia miadana aza izany, satria manana netbook aho, ny marina dia nahaliana ahy, toa tsara tarehy ary nahatsapa ho tsara izany, voalohany ho ahy izany.
Voaroaka amin'ny birao be dia be aho izao, manana xfce 4.12 ary tena faly amin'izany, satria nampiditra ny fanovana nantenaiko izy ireo, ka efa nanao veloma an'i Mate aho. Araka ny hitanao dia manandrana manana mpanoratra maivana aho. Avy eo aho hanandrana Fluxbox, Pekwm, fvwm ary Openbox.
xfce dia mihoatra ny tsara, maivana ary tsara tarehy, mahamenatra ny faharetan'ny fivoarana ary izany thunar dia tsotra be. Ny olana misy ny gnome 3.x dia toa ahy, toa ny windows 8, tsy tontolo 100% natao ho an'ny birao izy ireo, be pitsiny be nefa mahita kokoa amin'ny tontolon'ny takelaka. Ny olona gnome dia mila miasa hatrany amin'ny maha-rindrambaiko malalaka malalaka tsara indrindra azy ireo, ary raha izany, raha manam-potoana izy ireo, manatsara ny loharano laniny kely.
PS: Moa ve ny famoahana ny Windows 10 ho teboka iray amin'ny fahamatoran'ny birao gnu / linux?
Tsy mampiasa birao birao aho, fa kosa ny mpitantana ny varavarankely, ny openbox no tiako indrindra.
Gentoo dia mamela ahy hisafidy izay hapetraka nefa tsy mila mametraka tontolo iainana manontolo, ohatra, manaporofo aho fa eog gedit sy ny sasany hafa, manana fiankinan-doha amin'ny zero mihitsy.
Tokony holazaiko fa mahomby ny interface gnome minimalist, saingy manana olana izy io, raha manana lahasa sarotra ny programa, tsy maintsy mampiasa ny menus mahazatra izy ireo ary ao no sarotra kokoa ny mennome gnome noho ny menus mahazatra amin'ny androm-piainany rehetra.
satria mampihoron-koditra tokoa ny sangan'asa "outbox" gnome, na dia tsy dia tiako loatra aza i kde, dia tokony hiaiky aho fa satria ny andiany 4 dia manintona amin'ny distros rehetra ...
Heveriko fa tsy dia sarotra loatra raha farafaharatsiny mba hamolavolana endrika kisarisary roa mba hanaraka faran'izay tsara tarehy farafaharatsiny farafaharatsiny ...
Mikasika ny fandefasana dia hampidiriko ao amin'ny Ubuntu izany, hizahako toetra azy ary hanohy amin'ny ozonOS
devid dia hoy izy:
Ny maodelin'ny birao Gnome 3.16 dia toa ARCHAIC ihany koa amiko, nanomboka tamin'ny folo taona 98, fony mbola kely ny windows 98, ambonin'ilay mavesatra dia ratsy tarehy be izy. Aleoko manamboatra birao manokana amin'ny xfce toy ny windows 7.
Mamaly an'i devid
miresaka momba ny gnome ho birao ratsy tarehy ianao ary mampiasa xfce hanamboarana azy toy ny winbugs 7… izay novakiako androany.
Mikasika ireo vaovao dia manantena aho fa hahatratra farafaharatsiny farafaharatsiny Ubuntu gnome
Valiny tamin'i Gilbert
Clash of Clan, mamorona ny tanànanao ary aringano ny fahavalo. Ahoana ny fomba filalaovana amin'ny Android?